Newcastle oo Soo Gabagabeysay Rikoorkii guul darro La’aanta ee Kooxda Chelsea “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Kooxda Newcastle United ayaa garoonkeeda St James Park 2-1 uga badisay kooxda Chelsea oo aan laga badin markii uu bilowday horyaalka ingiriiska.
Kooxda Chelsea oo uu hogaamiyo macalin Jose Mourinho ayaana 23-kulan laga badin dhamaan tartamada ay ka qeyb galeyso.
Ciyaaryahan Papiss Cisse oo bedel ku soo galay ciyaarta ayaa qeybtii danbe ee ciyaarta labada gool u dhaliyay kooxda Newcastle United.
Kooxda Newcastle United ayaa tobankii daqiiqo ee ugu danbeeyay ciyaarta ku ciyaareysay toban ciyaaryahan ka dib markii uu kaarka casaanka ah ka qaatay ciyaaryahan Steven Taylor oo daafaca ka ciyaarayay.
Ciyaaryahan Didier Drogba oo bedel ku soo galay ciyaarta ayaa goolka kaliya u dhaliyay kooxda Chelsea.
Macalinka kooxda Newcastle United Alan Pardew ayaa ku amaanay ciyaartoydiisa guusha ay ka soo hooyeen kulankii Chelsea.
Kooxda Chelsea ayaa horyaalka ingiriiska ku hogaamineyso 26-dhibcood,halka kooxda Newcastle ay horyaalka uga jirto kaalinta todobaad,iyadoo leh 23-dhibcood.